Unogona here kukurudzira kutenga backlinks kubva mumablogi (PBNs)?
Kana ini, ini handigoni kukurudzira, kana kukuratidza chaizvo kuti ndiani anofanira kutongwa kutanga. Chinhu ichi ndechokuti ini pachedu hainzwi seGrey-Hat SEO, kana kuti Mwari achirambidza Black-Hat SEO. Uye kutenga backlinks kubva kumiganho yemavhugi ehurumende ndiyo chirongwa chechokwadi chekuvengwa neGoogle zvakanyanya. Ndinotenda kuti kubhadharwa backlinks kubva mumatareji (PBNs), zvisinei kuti vanobudirira sei panguva ino, ndiyo inonyanya nzira yekuwana yakaremara uye isinganzwisisiki (dzimwe nguva kunyange irreversible) kuchema.
Kunyange zvakadaro, mabhuku ehutachiona ega ega anozivikanwa iye zvino, uye ndakaonawo vazhinji vanoita webmasters vanofarira chibvumirano uye vachibatsirwa nekufambira mberi kwakanaka uye kwakakosha kunogona kuitika mune SEO. Asi chii chiri chokwadi? Nzira yekuita sei chisarudzo chakaumbwa zvakanaka pamusoro pe backlink kubva pamablogi? Ngatiedzei kuita zvinhu zvose zvakajeka - kungova nehuwandu hwechokwadi hunotonhora uye mazano mashomanana ekuyera kufambisa kwavo nehana - como tener buenas fotografias con una camara digital. Mushure mezvose, zvinongova kwauri kuti usarudze.
Backlinks kubva kuBlogs Blogs Zvakanaka kuti:
Kuva nekutonga kwe SEO, ndinoreva kuti unogona kuwana mukana wakasimba kupfuura vavakwikwidzi vako. Zvose zviri nyore - kutenga zvigaro kubva paPBNs zvinoreva kuti iwe wakasununguka kuisa mararamiro ako sehupenzi kuti uedze chero zvingasarudzwa zvekubatanidza ivo pachavo uye zvinyorwa zvavo zvinyorwa. Hongu, inofadza pfungwa inofadza - nekuda kwekuti hapana imwe sarudzo inopa rusununguko rwekutarisa zvose zvirikuita - pano uye zvino.
Kubatsirwa kubva kumasimba akakurumidza pakarepo, sekuna PBNs unogona kushandisa simba rekare uye rakavimbwa nevatendi vekare kare -. Kutenga backlinks kubva kumablogi e-blogs kunogona kutarisa kunyanya kukoshesa, kunyanya kufunga kuti rudzi urwu rwekubatana runonyanya kuoma kuvaka.
Kuchengetedza nguva yakawanda uye simba, nekuda kwekutengesa paPBNs - haufaniri kushanda nehukama hwekufambisa kana kuvaka. Kana ini, basa rakaoma rakadai rekuziva mikana yakanaka yekusvika kune imwe nzvimbo ingangove yakaipisisa nguva yakawanda yandaimbova nayo.
Kunyange zvazvo PBNs inoshamisa nguva inonzwisisika-vari kuponesa, vari kusiya musuo wakazaruka kuti utarisane kunyange pakupedzisira zvinetso zvakaoma mumutauro wekugadzirwa kwevanhu. Ndinoreva, somuenzaniso, kuti dzimwe nguva hazvigoneki kutadza kuwana idzi PR high backlink kubva kune akwegura uye madzinza akavimbika. Kuita kunenge kusingakwanisi kutarisirwa kunyange usati wasvika kwairi, zvichida pasina kuputsa mirayiridzo. Mushure mezvose, kushandisa mari yako nguva nekuedza mukuvaka ukama chaiyo kana humwe humwe hukuru hwekufambisa - haukwanisi kukupa chero zvaunotarisira kana zviitiko zvinotaridzika, kwete kutaura kufambira mberi kwakachengetedzwa muhukama huripo kwenguva refu.
Zvakanaka, hezvino zvimwe zvezvinhu zvakashata nezvemashureki kubva pamablogi, nekuda kwekukwana. Mumamiriro ezvinhu akaipisisa, kushandiswa kwePBNs kwekuvaka chivako kunogona kuguma nekurangwa kwebhuku-dzimwe nguva zvinogona kutowedzera kuwedzerwa apo zvose zvinoguma nebvumirano rekusingaperi pakutsvaga. Kana zvichiitika saizvozvo, hapazovi nechinhu choga, kunze kwekuvaka webhusaiti yako yehurombo kana bhulogi zvakare - kubvira pakutanga.